Izute OnePlus 5T na lava red | Gam akporosis
OnePlus 5T mara ọkwa na lava red
Ọ dị izu abụọ kemgbe E kpughere OnePlus 5T ma anyị matara nke ha nkọwa zuru ezu. Ọ ghọrọ otu n’ime ihe ekwuru okwu banyere ekwentị n’afọ a. Ọzọkwa, dị ka ọtụtụ, bụ otu n'ime ihe kacha mma tọhapụrụ. Mana, n'enweghị obi abụọ, OnePlus 5T a bụ ekwentị na-enye ọtụtụ ihe iji kwuo banyere ya. Ọ ga-emekwu na ụdị ọhụụ a.
Otu n'ime ole na ole ndọghachi azụ nke ọtụtụ ndị na-enweta na ngwaọrụ ahụ bụ agba ya. Kama enweghị ya. Yabụ maka ndị ọrụ a enwere ozi ọma. Onye OnePlus 5T biara na uhie uhie. Obere ekwentị na-adighi nma.
Ọ bụ ụdị nke nwere 8 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa Nke ngwaọrụ. Ọhụrụ ọhụụ ekwentị na-ewe bụ n'ezie ihe dị egwu. Jikwaa ịgbanwe radically na ọhụrụ a na agba. Oge dị oke mkpa maka OnePlus, nke mechara nwee ike ime ihe dị iche na mpaghara a.
E gosipụtara ụdị nke a na China, ebe ọ na-aga na-oru. Ma, Onweghi ihe ekwuru maka igba egbe nwere ike gha na ahịa ndi ozo. O nwekwara ike ịbịa, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ achọghị ikwu okwu n'okwu a. Yabụ n'oge a, naanị anyị nwere ike ịmasị OnePlus 5T a na lava red na onyonyo ndị a.
E gosipụtaghị ụbọchị ọpụpụ ya.. A na-ekwu na ọ ga-abụ na njedebe nke afọ, ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ media na-ama na-ezo aka 2018. Ma, onye ga-egosi na nke a bụ ụlọ ọrụ. Ihe na ruo ugbu a ha achọghị ime.
OnePlus ewerewo ihe ize ndụ site na ụdị ọhụụ a nke OnePlus 5T. Egwuregwu ahụ agaala ha nke ọma. Ha jisiri ike nye ekwentị ihe onyonyo ọhụrụ. Ya mere ị pụrụ inwe nwere ike ire nke ọma. Anyị na-atụ anya ịnụkwu banyere mmalite ya na ahịa ndị ọzọ n'oge adịghị anya. Kedu ihe ị chere maka ụdị ekwentị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus 5T mara ọkwa na lava red
[APK] Download ọhụrụ mbipute Xperia Music No ROOT Android 4.4+
Ihe ngosi Galaxy S8 nwere agba ohuru: burgundy uhie